ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒ – Min Thayt
Min Thayt February 1, 2020 March 18, 2020
ဝါဒဖြန့်ချိရေးနဲ့ စာရေးဆရာအကြောင်းကို ကျနော် စာတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ဝါဒတစ်ခုအကြောင်း ရေးချင်ပါသေးတယ်။
စာရေးဆရာဟာ တနည်းအားဖြင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားဖြစ်တယ်။ စာရေးဆရာဟာ သူယုံကြည်တဲ့ဝါဒကို သူဖြန့် လေ့ရှိတယ်။ သူဆွဲကိုင်ထားတဲ့ဝါဒနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဝါဒကို တိုက်ခိုက်တယ်။ ထိုးနှက်တယ်။ ဝေဖန် တယ်။ ရှုတ်ချတယ်။ စာရေးဆရာဟာ သူနှစ်သက်တဲ့ဝါဒကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ စာရေးဆရာဟာ ဘာဝါဒကို ယုံသလဲ။ ဒါကတော့ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မတူညီနိုင်ပါ။
ကျနော်က စာရေးဆရာ မဟုတ်ပေမယ့် စာရေးသူဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းကလည်း၊ ကိုယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ဝါဒကို လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ ဖြန့်ချိနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးခြင်းအတတ်နဲ့ လူအများ အကြားထဲမှာ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ဝါဒကို ဖြန့်ရတာဟာ စိတ်အာသာပြေစရာကောင်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအလုပ် ကို ကျနော် လုပ်နေမိတယ် ထင်ပါတယ်။
စာပေတွေထဲမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၊ အရင်းရှင်ဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ ကုန်သည်ဝါဒ အစရှိသဖြင့် နိုင်ငံရေးဝါဒပေါင်းများစွာကို ကျနော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ စာရေးဆရာတွေထဲမှာလည်း ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကို ယုံကြည်သက်ဝင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အရင်းရှင်ဝါဒ၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒနဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ စတဲ့ နိုင်ငံရေးဝါဒအထွေထွေကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ လက်ခံ ယုံကြည်ပြီး စာပေလက်ရာတွေ ရေးသားခဲ့ကြတယ်။
ကျနော့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒကို မပြောလိုပါ။ သို့သော် ဉာဏ်ရှုထောင့်အရ သိမှုဝါဒ တစ်ခုကို ကျနော် ယုံကြည်လက်ခံ ထားတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒဖြစ်တယ်။ သမ္မာဒိဌိဝါဒဖြစ်တယ်။ ဝိဘဇ္ဇဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှုကို ကျနော်လက်ခံတယ်။ အကြောင်းအကျိုးရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို လက်ခံတယ်။ အကြောင်းတရားနဲ့ အကျိုးတရားရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုကို လက်ခံတယ်။ ယုတ္တိရှိမှုကို လိုလားနှစ်သက်တယ်။ ကြောင်းကျိုးဆီလျှော်မှုကို ကျနော် သဘောကျတယ်။ ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ် ယုံမှတ် လက်ခံတာကို ကျနော်ကြိုက်တယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အတ္တနောမတ္တိနဲ့ ဂတိတရားကို ကျနော်မြင်အောင် ကြည့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေ၊ ဖြစ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ယုတ္တိတန်မှုကို ကျနော်ဆင်ခြင်တယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားတယ်။
ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ဉာဏ်လိုတယ်။ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ဖို့အတွက် အသိဗဟုသုတလိုတယ်။ အသိဗဟုသုတကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မြင်နိုင်ဖို့ လိုသလို၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်။ ဒီနှစ်ခုက အရေးကြီးတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း နည်းနာအားဖြင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းဖို့ လိုပြန်တယ်။ ဒီလိုအင်္ဂါရပ်တွေ ပြည့်စုံနေရင်တောင် အစွဲတရားတွေ၊ ဂတိတရားတွေ၊ အတ္တတွေနဲ့ ကင်းအောင် ကောက်ယူဖို့ ခက်တယ်။ ဒါကို သတိနဲ့ယှဉ်တွဲမှ ရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သိမ်မွေ့ စွာ ကပ်ငြိနေတဲ့အရာတွေ အမှုံအမွှားတွေအတွက် သတိလိုသလို၊ တစ်ဖက်မှာလည်း အမှန်တရားအတွက် သတ္တိလိုပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး ငါလည်း မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းမှု လိုအပ်နေပြန်တယ်။ ဒါကတော့ တရားသေဝါဒကို ငြင်းဖျက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒ ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်….
• နံပါတ် (၁) အသိအမြင်ဗဟုသုတလိုတယ်။
• နံပါတ် (၂) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မြင်တတ်မှု လိုတယ်။
• နံပါတ် (၃) ဆက်စပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်။
• နံပါတ် (၄) သတိနဲ့ ယှဉ်ဖို့ လိုနေပြန်တယ်။
• နံပါတ် (၅) သတ္တိရှိမှလည်း ဖြစ်မယ်။
• နံပါတ် (၆) ငါလည်း မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းမှု လိုတယ်။
ဘာ အသိ၊ ဘာအမြင် ၊ ဘာဗဟုသုတမှ မရှိတဲ့သူက ဘာကို ဆင်ခြင်မှာလဲ။ ဘယ်ဟာ အကြောင်း၊ ဘယ်ဟာ အကျိုးဆိုတာကို ခွဲခြားဖို့ အချက်အလက်ရမှာလဲ။ အချက်အလက်ရှိထားပြီဆိုရင်လည်း အပိုင်းလိုက် အပိုင်း လိုက်၊ အကန့်လိုက် အကန့်လိုက် ၊ အလွှာလိုက် အလွှာလိုက်၊ အမျိုးအစားအလိုက် သရုပ်ခွဲဖို့ လိုပြန်တယ်။ ဒါဟာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မှု စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းတရားကို ဆင်ခြင်ဖို့၊ အကျိုးတရားကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်မှု လိုတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အကြောင်းတရားတွေကို ဆက်စပ်ကြည့်ပြီး အကျိုး တရားဆိုတာကို ကောက်ထုတ်ဖို့အတွက် ဆက်စပ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအချက် (၃) ချက်ဟာ ဆင်ခြင်တုံ တရားဝါဒအတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်ချက်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။
သတိ၊ သတ္တိနဲ့ နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာကတော့ အကန့်အသတ်ကို ထိန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သတိဆိုတာက သိမ်မွေ့ပြီး မြင်နိုင်ဖို့ ခက်တဲ့ အရာတွေကို နားလည်သိမြင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ သတ္တိဆိုတာကတော့ ကြီးမားကြံ့ခိုင် တဲ့အရာတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် မလွယ်ပါဘူး။ ဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာ အားထုတ်ရတယ်။ အိပ်ပြီး ဆင်ခြင်နေလို့ မရဘူး။ ပျင်းပြီး ဆင်ခြင်လို့ မရဘူး။
• မေးမြန်း ရတယ်။
• ဒါမှ ဆင်ခြင်နိုင်မယ်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒ ထွန်းကားစေချင်တယ်။
အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို ရမ်းယုံ၊ မှန်းယုံ၊ အကန်းယုံနေလို့ မရဘူး။ ကောလဟာလဆိုတာကို ယုံကြည်လို့မရဘူး။ ကြားဖူးနားဝနဲ့ ရမ်းတုပ်မှန်းတုပ်တာ လုပ်လို့ မရဘူး။ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဆင်ခြင်ပြီး လက်ခံမှ ရမယ်။ အတိတ်အကြောင်းအခြင်းအရာတွေကို လေ့လာစူးစမ်းပြီး ဆင်ခြင်မှ ဖြစ်မယ်။ သွေးထိုးတာ၊ လှုံ့ဆော်တာ၊ ရှူးတိုက်တာတွေကို ဖယ်နိုင်မှ ကောင်းမယ်။
ဉာဏ်နည်းတဲ့ ခွေးဟာ “လူက ခဲနဲ့ပေါက်ရင်” လူကို မကိုက်ဘူး ခဲကို လိုက်ကိုက်တယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အဲသည်လိုဖြစ်နေလို့ မရဘူး။
ကျနော် စာရေးရင် ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒကို လက်ကိုင်ထားပြီးရေးတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ကျနော်ယုံကြည် တယ်။ လက်ခံတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျနော့်စာကို လူတွေ ဖတ်ရင် ဆင်ခြင်တုံတရားကို ရသွားစေချင်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒကို လက်ခံယုံမှတ်စေချင်တယ်။
• ကြောင်းကျိုးညီညွှတ်မှ ယုံမယ်။
• ယထာဘူတကျမှ ယုံမယ်။
• ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှ ယုံမယ်။
• အထောက်အထားခိုင်မှ ယုံမယ်…. ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မှာ သိမှုအရ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ နားလည်မှုအရ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင် သရွေ့ ဆန့်ထုတ်လေ့လာနိုင်မှ ကောင်းမယ်။ တတ်နိုင်သရွေ့ ဖြန့်ထွက်စူးစမ်းနိုင်မှ ကောင်းမယ်။ ဘက် တစ်ဖက်တည်း အမြင်နဲ့ လက်ခံထားလို့ မရဘူး။ နှစ်ဖက်တည်းလည်း မလုံလောက်နိုင်ဘူး။ မှန်ကူကွက်တွေ စုံအောင်ကြည့်မြင်နိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။ ဒါ့တောင်မှ နောက်ဆုံးမှာ “ငါလည်း မှားနိုင်သေးတာပဲ” ဆိုတာကို သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး နှလုံးသွင်းထားရမယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အစွန်းရောက်ဓလေ့ကို မပယ်ရှားနိုင်ဘူး။ သံသယကဲ ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ ခွင့်လွှတ်နားလည်မှု မမြင့်မားဘူး။ ဘယ်အရာတွေကို သင်ပုန်းချေ ရမယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ ဘယ်အရာကို မေ့ရမယ်၊ ဘယ်အရာကို မေ့မပစ်ရဘူးဆိုတာ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲသည်လိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်သွားလို့ မရဘူး။ အနာဂတ်ဟာ ရှိမနေဘူး။ အတိတ်က အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲ စကားလုံးတစ္ဆေအခြောက်ခံရပြီး ဘဝနိဂုံးချုပ်သွားမယ်။
• ဆင်ခြင်တုံတရား မရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အနာဂတ် မရှိဘူး။
• လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး။
• ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မရှိဘူး။
• တည်ငြိမ်မှုလည်း မရှိဘူး။
• အေးချမ်းသာယာခြင်းလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
နေ့လယ် ၃း၄၇
၁ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၂၀
Previous post မဲပေးခြင်းဓလေ့
Next post မြန်မာ့ပညာရေးသမိုင်းစဉ် ဆန်းစစ်ချက်